किचनमा जोडीले अ’श्लि’ल डा’न्सको भिडियो बनाइरहेका थिए, अचानक जे भयो त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन्न् ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/किचनमा जोडीले अ’श्लि’ल डा’न्सको भिडियो बनाइरहेका थिए, अचानक जे भयो त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन्न् !
सामाजिक सञ्जालमा धेरै किसिमका भिडियो शेयर भइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय हास्यास्पद छन्, कतिपय यस्ता छन् जसलाई देखेपछि तपाईलाई रिस उठ्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ मानिसहरू केहि शूट गर्न चाहन्छन् र क्यामेराले अरू केहि कैद गर्दछ।
यस्तै एक पल क्यामेरामा कैद भयो र यो जोडी देख्ने बित्तिकै भाइरल भयो । घरको भान्छामा मियाँ-बीवी एक्लै अ’श्लि’ल डान्स गरिरहेका बेला यो जोडीको भिडियो खिचिएको हो ।
इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा सेयर गरिएको यो भिडियो लाखौंले हेरिसकेका छन् । भाइरल भइरहेको यो भिडियोमा एक जोडीलाई किचनमा अ’श्लि’ल डा’न्स ग’रे’को देखिएको छ । जोडीले भान्सामा नै मोबाइलमा आफ्नो डान्सको भिडियो बनाएका थिए । श्रीमतीले ग्यासमा दूध उमाल्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् र दम्पती ग्यासको नजिकै नाच्न थाले ।
यो जोडी मोबाइलमा भिडियो खिच्नमा डुबेका थिए । चुलोमा तातो दूध छ भनेर दुबैले याद गरेनन् । अचानक डान्सको एक स्टेपमा श्रीमानले श्रीमतीको कम्मरमा हात हाले । तर यो हातले तातो प्यानलाई छोयो र उमालेको दूध दम्पतीमा पर्यो।
यस्तो अबस्था सिर्जना होला भनेर कल्पना सम्म पनि गरेका थिएनन्। अचानक उनीहरुको रमाइलो दुर्घटनामा परिणत भयो । आफ्नो डान्स कैद गर्ने रहरमा यो घटना दम्पतीको क्यामेरामा कैद भएको छ ।
यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएको थियो जहाँबाट भाइरल बनेको थियो । तर, यो जोडी को हुन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन ? तर यो भिडियो हेरेपछि मानिसहरूले यो जोडीलाई धेरै चो ट नपरोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छन् ।